Midowga Murashixiinta oo fariin u diray Somaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Murashixiinta oo fariin u diray Somaliland
Golaha Midowga Murashixiinta ayaa war-saxafadeed ay soo saareen ku sheegay inay aad uga xun yihiin xadgudubka lagula kacay dadka Soomaaliyeed ee laga soo raafay magaalada Laascaanood.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Murashixiinta, oo war ka soo saaray raafkii dadka shacabka ahaa loogu geystay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, ayaa wax aad looga xumaadu ku tilmaamay xadgudubka lagula kacay dadka Soomaaliyeed ee dan-yarta ah.
“Goluhu wuxuu ka soo horjeedaa in fal danbiyeed ay dad kooban geysteen loo bartilmaamsado bulsho idil, danbi wadareedna loogu ciqaabo hayb iyo deegaan ay ka soo jeedaan darted”. Ayaa lagu yiri, warka ka soo baxay GMM.
Musharixiintu, waxa ay falkaas ku tilmaameen, mid meel ka dhac ku ah Islaamnimada, Soomaalinimada, Dimoqoraadiyadda, Xuquuqul insaanka iyo sharciyada caalaamiga ah.
“Goluhu wuxuu aaminsan yahay in dadka Soomaiyeed ka dhaxayso wada noolaasho walaalnimo, iskaashi ehelnimo iyo isku gargaarid ummadnimo”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka.
Waxa ay sheegeen in ay ka damqanayaan, ku xadgubka lagula kacay sharafka iyo hantida dadka qasabka lagu barakiciyey, waxayna madaxda Somaliland ugu baaqeen, in la joojoyo bartilmaamedsiga dadka gaarka ah.
Culimada, odayada dhaqanka, aqoonyahanka, indheergaradka iyo waxgaradka ka soo jeeda Somaliland, ayay sidoo kale, ugu baaqeen in ay hor istaagaan falkaa gurracan ee dhaawacaya walaainimada, ehelnimada iyo ummadnimada ka dhaxaysa dadka Soomaaliyeed. Waa sida ay hadalka u dhigeene.
Soomaaliland ayaa, qabqabashada dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ee magaalada Laascaanood, u sababeeyay arrimo la xiriira amniga, iyo codsiyo ka yimid bulshooyinka degaanka iyo maamulka degmada Laascaanood, sida ay sheegeen.